सामाजिक मिडियाको माथिल्लो वर्ग हामीलाई असफल गर्दैछ | Martech Zone
मेरी छोरीको हाई स्कूलमा उनीहरूको एउटा क्षेत्र थियो जुन वरिष्ठको लागि पवित्र थियो "वरिष्ठ रग" भनिन्थ्यो। "वरिष्ठ रग" उनको उच्च माध्यमिक विद्यालयको मुख्य हलमा एउटा क्षेत्रमा निर्मित आरामदायक वर्ग थियो जहाँ माथिल्लो वर्गले ह्या hang्गआउट गर्न सक्दछ। कुनै नयाँ वा कनिष्ठ वर्गमा अनुमति थिएन senior रग
ध्वनिको मतलब हो, हैन? सिद्धान्त मा, यो वरिष्ठ उपलब्धि र गर्व को भावना संग प्रदान गर्दछ। र सायद यसले तल्लो वर्गका साथीहरूलाई माथि जान उत्सुकता प्रदान गर्दछ त्यसैले एक दिन रग तिनीहरूको हो। जस्तो कुनै वर्ग प्रणाली, यद्यपि, जोखिम उच्च वर्ग र अन्य बीच बढ्दो बिभाजन हो।
पछाडि सोशल मिडियाको शुरुआती दिनमा कुनै कक्षा प्रणाली थिएन। जब कसैले ब्ल्गोसियरमा एक महान ब्लग पोष्ट लेख्दछन्, हामी सबैले लेखकलाई खुशी पियौं र उनीहरूको पोष्टको प्रमोट गर्थ्यौं। वास्तवमा, लामो समयदेखि म केवल नयाँ ब्लगहरूको ब्लग पोष्टहरूलाई बढावा दिन्थें जुन मैले उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रयास गरेको थिएँ र उनीहरूले स्पटलाइटको एक टुक्रा पाएको सुनिश्चित गर्न प्रयास गरे। आज मेरा अनलाइन साथीहरू साथीहरू हुन् जसले मेरो ब्लग पत्ता लगाउँथे र यसको विपरित साझा गर्थे।
सामाजिक मिडिया छ परिवर्तन भयो। एक वर्ग प्रणाली बिल्कुल ठाउँमा छ। र माथिल्लो वर्गले आरामसँग संसारलाई उनीहरूको “वरिष्ठ रग” बाट अलग गरिरहेको छ। म उच्च वर्गको अंश होइन, तर म आफू नजिक छु भन्ने सोच्न चाहन्छु। तर कहिलेकाँही यसलाई मनपर्दैन। म उच्च वर्ग मा धेरै पुग्न र तिनीहरूले प्रतिक्रिया छैन। तिनीहरूले ट्विटर, फेसबुक, Google+ वा ईमेल द्वारा प्रतिक्रिया गर्दैन।
प्रकटीकरण: यो पोष्टले मेरो व्यवहार पनि राम्रोसँग वर्णन गर्दछ। म अरूको आलोचना गरिरहेको छैन यति मात्र सामाजिक मिडिया ब्रह्माण्ड मा परिवर्तन देखेर।
याे अास्चर्यजनक छ। जबकि यी व्यक्तिहरू सामाजिक मिडियाको शक्तिमा पुस्तकहरू लेखिरहेका छन् र उनीहरूले दिएको अवसरको बारेमा आफ्ना कथाहरू सुनाइरहेका छन्, अर्को व्यक्तिलाई सहयोग पुर्‍याउन वे बेवास्ता गर्छन्। मैले उनीहरूका धेरै ब्लगहरू पढें र समर्पित अनुयायीहरूको धेरै टिप्पणीहरू देखें जुन रिट्वीट गर्दै, साझेदारी गर्दै र उनीहरूलाई बधाई दिँदै महान सामग्रीमा ... पंडितबाट कुनै प्रतिक्रिया बिना। कुनै पनि होईन। झलक होइन।
यस उद्योगको बृद्धिसँग, म कुनै पनि हिसाबले यसो नभएको छु कि हरेक अनुरोधको उत्तर दिनै पर्दछ - संख्याहरू ज्यादै ठूलो छन्। म आफैंले, हरेक अनुरोधलाई जवाफ दिन असम्भव भएको छु। तर म do प्रयास गर्नुहोस् यदि कुराकानीले मेरो सामाजिक नेटवर्कमा स्पार्क गर्दछ र म यसको बारेमा जान्छु, म कुराकानीमा सामेल हुन बाध्य महसुस गर्दछु। यो मैले गर्न सक्ने कम से कम छ कि मेरो सामाजिक मिडिया नेटवर्क को अधिकार छैन यदि यो प्रत्येक एक पाठक र अनुयायी को लागी होईन।
म नामहरू लिन गइरहेको छैन, न त म यो सबैको हुँ भन्दिन। त्यहाँ धेरै अपवाद छन्। यद्यपि त्यहाँ धेरै सामाजिक मिडिया रक स्टारहरू छन् जुन उनीहरूको कुकुर खाना खाँदैनन्। तिनीहरू बाहिर जान्छन् र पुस्तकहरू लेख्छन्, बोल्छन् र ठूला निगमहरूसँग परामर्श गर्दछन् - तिनीहरूलाई हप्काउँछन् जब तिनीहरू पारदर्शी हुँदैनन् न त संलग्न। र त्यसपछि उनीहरूले आफ्ना अन्य उच्च वर्गका साथीहरूलाई बोलाउँदछन् र उनीहरूसँग कुराकानी गर्छन् उनीहरूको आफ्नै नेटवर्कलाई वेवास्ता गर्दै स्थानीय उपत्यका स्टीक हाउसमा मद्यको बोतलमा।
हाइप मान्छेहरूमा विश्वास नगर्नुहोस्। यदि तपाईं यी पेशेवर मध्ये एक पालना गर्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूका पुस्तकहरू खरीद गर्दै र उनीहरूसँग कुराकानी गर्न जाँदै ... तिनीहरूको गतिविधि समीक्षा गर्न केहि मिनेट निकाल्नुहोस्। के तिनीहरू आफ्नै मार्गदर्शन पछ्याउँछन्? के उनीहरूले नयाँ फेसबुक र जूनियरलाई उनीहरूको फेसबुक पेजमा जवाफ दिन्छन्? के तिनीहरू अनुगमनकर्ताहरूको राम्रो टिप्पणीहरू रिट्वीट गर्छन् जुनसँग कुनै पनी छैन? के तिनीहरू आफ्नै ब्लगका टिप्पणीहरूमा कुराकानीहरू अनुसरण गर्छन्?
यदि तिनीहरूले गर्दैनन् भने, जो गर्ने को लागी जानुहोस्! रगलाई तिनीहरूको मुनिबाट बाहिर तान्नुहोस्।
टैग: रैंटसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया लेखकसामाजिक मिडिया विज्ञहरुसामाजिक मिडिया गुरुहरुसामाजिक मिडिया स्पिकरहरू
फेब्रुअरी १,, २०११ 22:१:2013 अपराह्न
काश, म भन्न सक्दछु कि म तपाईंको पोस्टसँग सहमत छु, र म निश्चित छु कि तपाईं के भन्न खोज्नुहुन्छ धेरै सोशल मीडिया प्रयोगकर्ताहरू र ब्लगरहरूमा सत्य छ तर म आफैंलाई ब्लगि world संसारमा कनिष्ठ मान्दछु र मैले राम्रो अनुभवहरू प्राप्त गरेको बाहेक अरू केही पनि गरेको छैन। केही वरिष्ठहरुलाई।
मैले क्रिस बोगन, जेसन फल्स, स्कट स्ट्र्याटन, डेभ केर्पेन आदि जस्ता ठूला केटाहरूबाट जवाफहरू लिएको छु र मैले डेव केर्पेन र उनको किताबहरू बारेमा दुई पटक लेखेको छु र उसले मेरो पोस्टहरू आफ्नो सामाजिक नेटवर्कमा साझा गरेको छ।
अनुभवबाट मैले फेला पारे कि सामाजिक मिडियामा धेरै ठूला केटाहरूले उनीहरू के प्रचार गर्छन् भनेर अभ्यास गर्छन् जसले सम्भवतः किन उनीहरू यत्तिको सफल भएका छन्।
यो सुन्न ठूलो छ, @ म्याटदर्न: डिस्कस! यो मात्र हुन सक्छ कि म एक मूर्ख छु। 🙂
ठिक छ तपाईले आफ्नो ब्ल्गका टिप्पणीहरुलाई जवाफ दिनुहुन्छ ताकि तपाई झिक धेरै त्यस्तो हुन सक्नुहुन्न! 🙂
डेभिड मेर्मन स्कट
डगलस, हाँ! मलाई आशा छ कि म "खराब वरिष्ठ" वर्गमा छैन। मलाई लाग्छ म पहुँच गर्न, प्रतिक्रिया दिन, र स do्लग्न भएको छैन। के त्यहाँ कोही मानिस छन् जुन मैले बाटोमा स्लाइट गरेको हुन सक्छ? अवश्य। त्यहाँ समय हुन्छ जब म संलग्न गर्दिन (वा सक्दैन)। गत हप्ता उदाहरणको लागि म टाढाको पेरू र बोलिभियामा थिएँ र वेबमा धेरै सीमित पहुँच थियो (दिनको एक घण्टा मात्र)। हिजो म १० घण्टाको लागि विमानमा थिएँ। कहिलेकाँही भाषण पछि म २०० वा 10०० ट्वीट्स र Facebook० फेसबुक मित्र अनुरोध प्राप्त गर्नेछु। म बहाना बनाइरहेको छैन, मात्र वास्तविकता बताउँदै। यद्यपि, धेरै जसो समय, म पहुँचको लागि प्रयास गर्छु।
ओल्गा I. Mizrahi
@douglaskarr: disqus @ google-4e3cce4e05af3f9a841d921fe02f1ea7: disqus @mattsstream: disqus राम्रो अवलोकन। मैले निश्चित केही सीनियरहरू "अनन्य क्लबहरू" गठन गरेको देख्छु जुन भर्खरको सम्बन्धमा साँचो सम्बन्धको नभएर नयाँ बच्चासम्म पुग्दछन्, बरु उनीहरूलाई "नि: शुल्क" वेबिनारमा डोरी दिने आशा गर्दछ जुन त्यसपछि बिक्री पिच हुन्छ। कुरा यो हो कि, वरिष्ठ रगमा उनिहरू जस्तै, तिनीहरू छिट्टै अगाडि बढ्न र विकसित हुन आवश्यक हुनेछ, वा तिनीहरू आफैं पराजित हुनेछन् जुन १२ औं कक्षा दोहोरिएको छ।
"१२ औं कक्षा दोहोर्याइएको" मा टिप्पणी मनपराउँनुहोस्! त्यहाँ हाई स्कूलका व्यक्तिहरूको समानता पनि छ जो अझै घरमै बसिरहेका छन्, ग्याँस पम्प गर्दैछन्, र उनीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ दिनको रूपमा फुटबल स्टारको दिन प्रतिबिम्बित गर्दछन्।
कम एडीएम १ एन
के यो आश्चर्यजनक छ? व्यवस्थापन परामर्शहरूले रूपान्तरणको शक्ति प्रचार गर्दैछन्, तर परिवर्तन गर्नका लागि सबैभन्दा प्रतिरोधी छन्। तथ्य: तिनीहरू अझै SAP कार्यान्वयन गर्दै छन् तिनीहरू पहिले २० बर्ष पहिले थिए। त्यसो भए, "सोशल मिडिया गुरुहरू" केवल परामर्शदाता हुन्। र सम्झनुहोस्, एक परामर्शदाता केटा हो जसले माया गर्न को लागी १००० तरिकाहरू जान्दछ, तर एक प्रेमिका छैन। (प्रकटीकरण: म बिग of मध्ये एकको पार्टनर थिएँ)
मेरो मामलामा कम्तिमा पनि म सल्लाहकार होइन। म पुस्तक लेख्छु, भाषण दिन्छु, मास्टरक्लासहरू चलाउँछु, केही कोचिंग गर्छु र सल्लाहकार बोर्डहरूमा बस्छु। यद्यपि विगत years बर्षदेखि मैले कुनै परामर्श गरेको छैन।
मैले पहिला यस्तै विचारहरू राखेको छु, यसलाई लेख्नु अघि .. अझै पनि 'माइलेज फरक फरक हुन सक्छ' अवस्था। म्याट जत्तिकै मैले उनीहरूको वार्तालापमा 'कुलीन' देखेको र अनुभव गरेको छु र तपाईले उनीहरूलाई देख्नु भएको जस्तो हैन। बोल्नको लागि मैले उनीहरूको समूहमा केही विरामहरू देखेको छु, अन्यले देखेको छु भनेर। ती चक्रहरू जाँच्नेहरूको विचारमा .. हामी हेर्न सक्दछौं कि यदि हाम्रो परामर्शदाताहरू के प्रचार गर्छन् भनेर अभ्यास गर्दैनन्, यदि हामी पुस्तकहरू किन्छौं, व्याख्यानमा उपस्थित हुन्छौं, मोटो परामर्श शुल्क तिर्दछौं, बटनहरू र ब्याजहरू क्लिक गर्दछौं र त्यो खेल खेलिरहन्छौं। । त्यसोभए म निश्चित छुइन कि यदि तिनीहरूले हामीलाई असफल गरिरहेका छन भने .. खरीददार ठीक होशियार रहनुहोस्?
अहिले मेरो ध्यान मेरो छ। म अरूको बारेमा धेरै चिन्तित हुन कोशिस गर्दैछु, चीजहरू जुन म नियन्त्रण गर्न सक्दैन। म आफ्नो चीज गरिरहेको छु, अझ बढी गर्न कडा मेहनत गर्नुहोस्, मेरो लागि अझ राम्रो गर्दै, मेरो ग्राहकहरू, मेरो बिज। FWIW।
@ डग्लस, सायद तपाईले भनेको भनेको सही छ, सायद तपाईलाई भएको हुन सक्छ, सायद "जेष्ठ" मानिसहरु कुराकानीलाई जवाफ दिन एउटा चरणमा पुगेका छन् ठूला केटाहरुले उनीहरूले मूल्य जोडेर गरेको कुराको उत्तर दिन्छन ... तर योको आधारभूत कुरा के हो केही गलत लाग्दछ। सामाजिक मिडियामा माथिल्लो स्तरमा पुग्नाले तपाइँलाई प्रत्येक एकल पोष्ट वा टिप्पणीलाई जवाफ दिन बाध्य गर्दैन, वा पोष्टहरू जुन मान थप्न सक्दैन। अन्तमा, यसकारण तिनीहरू यहाँ छन् (कुराकानीमा मसलाहरू थप्दै)। र केहिलाई जस्तै @ डेभिड मेर्मन, हामीसँग त्यसो गर्न असम्भव छ (जबसम्म उसले सहायकलाई काममा लिदैन)।
मैले एक सहायक भएको विचार खोजी गरेको छु। तर मैले यस्तो निष्कर्ष निकालेको छु कि मेरो नाम प्रयोग गरेर अरू कसैले सामाजिक रूपमा भाग लिने सम्भावित तरीका छैन। कुनै हालतमा हुदैन। यदि यसमा मेरो नाम छ भने, मैले यो लेखें। मैले केटा कावासाकी जस्ता व्यक्तिहरूलाई भनें कि म उनीहरूलाई के मन पर्छ म उनीहरूको प्रेम गर्दछु तर आफैंले स्वचालित पोष्टिंग र सहयोगीहरु द्वारा पोष्टिंगमा असहमत हुन्छ
थॉमस पी। लेजल जूनियर
फेब्रुअरी १,, २०११ 24:१:2013 अपराह्न
पहिले, म स्वीकार गर्दछु र सामाजिक मिडिया र यसको परिचर "अनुयायी-जहाज" मा घातात्मक वृद्धिलाई जोड दिन्छु। दोस्रो, केहि व्यक्तिले सजिलैसँग ब्यान्डविथ, पोष्टहरू, र इन-बक्सहरू अनावश्यक रूपमा टिप्पणीहरू र "रिट्विटहरू" स्वीकार गरेर चुरोट छोड्ने छनौट गरे। अन्तमा, यो जीवन हो। तपाइँ केवल देखाउनको लागि मेडल प्राप्त गर्नुहुन्न। साँचो संलग्नता प्रतिक्रिया begs; "Ditto-Heads" गर्दैन।
डग्लस मार्जोरी क्लेम्यान यस बारे मा एक फरक ढ-्गले लेखिएको थियो। म यसको अन्त चार वर्ष अघि प्राप्त गर्दै छु र त्यतिबेला र अहिले स्तब्ध भएको थियो। उनीहरूका कार्यहरू यति संरेखित थिएन कि उनीहरूले के भने, मैले चाँडै नै सिकें जो full * (पूरा) थिए।
यो निराशाजनक छ जब तपाईं यस्तो व्यवहार देख्नुहुन्छ र त्यसपछि मैले भनेको थिएँ, मैले मेरो ध्यान मेरो व्यवसायको लागि बढिरहेको कुरामा राखें। यस गडबडको अर्को पक्षमा, म हरेक चरणलाई जान्छु, प्रत्येक हप्ता श्रोताहरूलाई मूल्य प्रदान गरेर - #BBSradio को लागि हामीसँग रहेका प्रत्येक श्रोता मेरो कुराकानीबाट आएका हुन् न कि ए-लिस्टरले मलाई उनीहरूको "श्रोतासम्म पु .्याएको हुनाले।" "
उनीहरू पर्दा पछाडि मसँग कुरा गर्दा केहि साझा गरेर म केही बस्ट गर्न सक्दछु। मैले छिटो नै सिकें, तिनीहरू आफ्नो स्थिति बारे चिन्ता गर्छन् जब कोही उनीहरूसँग आउँदछ जो उनीहरू जत्तिकै चलाख छ र यो एउटा लाजमर्दो कुरा हो। म मेरो वरपरका मानिसहरूलाई बढावा दिन चाहन्छु र मलाई थाहा छ कि हामी सबै बढ्न सक्दछौं। यदि हामी मध्ये एक मध्ये एक सफलता छ भने यो एक अर्को बाट लिने छैन, यसको सट्टा यसले हामी सबैको लागि सफलता बृद्धि गर्दछ।